Auto Parts Mpanamboatra / Môtô Magine Parvit Pershlier | 1D Auto Faritra
Piston sy peratra
Plug plug tsara indrindra
Solika motera fiara
Serivisy avo lenta sy tsara kokoa
Mifantoka amin'ny fikarohana isika& Mamolavola modely japoney avy any Piston,
Piston Ring, Liner, Gasket, Gasket feno, Engine Bearings,
Mentika solika, ny plugs spark ary plugs mamirapiratra.
Eo amin'ny 1D eo ho eo
Fitaovana Auto Corporation 1d Guang China, dia hita tamin'ny taona 2010 miaraka amin'ny fanondranana fanondranana Expertise ao amin'ny motera, ny orinasa dia natokana ho an'ny PAPSS ASSY, ary ny Gasket, Engine Bear, Sparks Plugs, menaka lubricant Sns
Mirehareha izahay fa ny piston-piston-pisary ao Shina ary manamboatra ny mpanamboatra Asy izay miaraka amin'i Toyota, Mitsubishi sy Isuzu OEM famatsiana rojo.
Ny tombotsoan'ny orinasa stratejika 1D dia mifantoka eto ambany:
1. Fikarohana mafy& Mamolavola ny teknika: Manamboatra modely mihoatra ny 1600 sy ny tsipika famokarana 32, famokarana isan'andro, 40000 pcs Pcs, 200.000 PCS PCS PCS PION PISTON.
2. Fitaovana& Taratasy: Masinina Bosch / Siemens izay mitarika, Japan NPR sy 170 dia mahafeno ny teknisianina voaofana, CHIP CHIPS, ISO / TSL6949-2002, ISO-2015 Nankatoavina Ect.
3. Ny lojika lojika& Ampy tsara ny tahiry
4. Milentika& Serivisy ho an'ny mpanjifa: Sokafy ny birao fivarotana sy fivarotana mivantana, manatanteraka ny mpanjifa miaraka amin'ny serivisy "fanampiana kely rehetra".
Ny ampahany amin'ny Auto 1D dia mpanamboatra Auto mpanamboatra mifantoka amin'ny ampahany amin'ny motera fiara.
Ny kalitao tsara indrindra mitondra kalitao tsara indrindra kalitao
1d tsara kalitao tsara indrindra amin'ny orinasa, trano& Taratasy fanamarinana: milina Bosch / Siemens lehibe indrindra eran-tany
Orinasa waten kalitao tsara indrindra
Wholesale Wholesale Wholesale miaraka amin'ny vidiny tsara - Technology NPR Japon ary 170 izay mahafeno ny teknisianina voaofana, coating coating, ISO / TSL6949-2002, ISO-2015 Nankatoavina Ect.1D Factory tsara indrindra kalitao tsara indrindra, Cargo Curitistic& Sokajy vonona
GLOG GLOW CLUTIGS CLUGLE Wholesale - 1D Auto Parts Co., LTD.
1d kalitao avo lenta an-tsokosoko - 1d auto part co., Technology NPR Japan ary 170 dia mahafeno ny teknisianina, Coating, ISO-TSL6949-2002, ISO-2015 Nankatoavina ISO-2015 ECT.
Ny orinasa mpanamory entana tsara indrindra amin'ny kalitao
1d tsara indrindra kalitao tsara indrindra amin'ny orinasa Gaset, trano& Taratasy fanamarinana: milina Bosch / Siemens lehibe indrindra eran-tany
Orinasa piston tsara indrindra kalitao
1D Factory Piston kalitao tsara indrindra& Taratasy fanamarinana: milina Bosch / Siemens lehibe indrindra eran-tany
Ny vidin'ny orinasa Piston tsara indrindra - 1D
1D Best Piston Factory vidiny - 1D, trano& Taratasy fanamarinana: milina Bosch / Siemens lehibe indrindra eran-tany
Mpanamboatra Auto Auto Mpanamboatra ho an'ny faritra motera fiara mandritra ny 11 taona mahery.
Mpanamboatra peratra Piston Professional Piston
1. Toyota, Honda, Suzuki, Suzuki, Dafa ary Nissan Gasoline dia nanangana ny peratra vita amin'ny osy mena, ny boribory any ivelany, ny alloy faharoa na ny onjam-peo NAGS miaraka amin'ny kaody loko (mena, mavo sy manga) ary type t na n, ny peratra tsirairay dia miparitaka amin'ny kaody loko (mena, mavo ary manga)2. Mitsubishi, Nissan, Toyota, Diesel Engines dia nanangana ny famoretana mena, boribory boribory voalohany, ny tsipika boribory, ny hazo fisakaizana, ny peratra solika Isaky ny peratra misy loko miloko loko (mena, mavo ary manga)3. Ny motera Isuzu Diesel dia manangana ny dingana voalohany, ny andaniny telo na ny plating efatra, ny fitsaboana ny peratra solika ary ny peratra menaka lehibe, ary ny polyterankluoroethylene ho an'ny lohataona. Type T na N, ny perla miloko tsirairay (mena, mavo ary manga)
Mpamatsy tsara indrindra entona
Mpamatsy entana feno entona feno.Ny fitsapana ny vokatra dia natao tsy tapaka mba hiantohana ny kalitao avo lenta.
dia atoro be ho azy.
Mpanamboatra spark matihanina matihanina
Mpanamboatra spark matihanina.Ny serivisy fanatsarana ny hanamorana ny fanatsarana ny sary marika.
Lohataona avo lenta amin'ny loham-bolo avo lenta - mpamatsy 1D
Ny andraikitry ny entona dia mangalatra, ny singa tombo-kase elastika eo anelanelan'ny sakana cylinder sy ny lohan'ny cylinder, nampiasaina mba hisorohana ny entona fanerena avo, menaka fanerena sy menaka sy coolant sy ny cool.1d auto ampahany co., Ltd. Gasket kalitao avo lenta - 1d auto ampahany co., Ltd.
Intro amin'ny fampiasana panty liners 1d auto ampahany co., Ltd.
Ny Cylinder Liner dia ampahany cylindrical, napetraka ao amin'ny lavaky ny cylinder an'ny vatana, ary raikitra ny lohan'ny cylinder. Ny piston dia mahatonga ny famerenam-bokatra ao anaty lavaka anatiny sy ny rano mangatsiaka dia omena any ivelany. Ny fiasan'ny Liner Liner dia:1. Ny habaka fiasana Cylinder dia namboarina miaraka amin'ny lohan'ny cylinder sy piston.2. Cylinder Liner avy amin'ny Cylindron Piston Diesel Engine Berge Bears Piston dia manosika ary lasa mitarika ny fihetsiky ny piston.3. Famindrana ny hafanan'ny fivoriambe piston ary ny tenany amin'ny rano mangatsiaka mba hahatonga azy io ho amin'ny mari-pana mety.4. Ny satroka cylinder an'ny motera roa-stroke roa dia nalamina tamin'ny seranan-tsambo fiaramanidina, izay nosokafana sy mihidy ny piston hahatsapa ny fitsinjarana ny rivotra.1d auto ampahany co., Ltd. Intro amin'ny fampiasana panty liners 1d auto ampahany co., Ltd.
BEST 4D33 Piston Mitsubishi Mamatsy
Alfin Fuso Truck Mitsubishi 4d33 Diesel Engine Parts Pissel Poton 108mm ho an'ny ME013312 Me016896Manaraka ny fitsipika 1D isika: vokatra avo lenta, mpanjifa aloha. Ao amin'ny teknolojia teknolojia sy Taiwan ny vokatra eto dia.4d33 dia iray amin'ireo modely be dia be indrindra. Ary ny kalitaon'ny vokatra dia eken'ny mpanjifa maro. Tsy hte tsara indrindra izahay, fa manolotra izay ilainao fotsiny.Tongasoa eto amin'ny fifandraisana aminay ary manomboka amin'ny fiaraha-miasa voalohany.1d auto ampahany co., Ltd. BEST 4D33 Piston Mitsubishi Mamatsy
Pictional Piston Ring mpamatsy vola UK mpanamboatra UK
Ny peratra Piston dia karazana peratra elastika metaly misy ny fanalan-jaza lehibe ivelany, izay ampiasaina hampidirana ao anaty ny alin'ny Piston Groove. Ny peratra piston dia karazana roa: peratra fametahana sy peratra solika. Ny peratra compression dia azo ampiasaina hanisy tombo-kase ny fangaro gazy tsy azo fehezina ao amin'ny efi-trano mitambatra. Ny peratra solika dia ampiasaina hanorotoro menaka be loatra amin'ny cylinder.1d auto ampahany co., Ltd. Pictional Piston Ring mpamatsy vola UK mpanamboatra UK
Raha tsy hitanao ny vokatra vita amin'ny trano tsy mety amin'ny tetikasa, avelao ny mpanam-paty amin'ny alàlan'ny fanamboarana ny fanamboarana ny Ash dia manampy anao hahazo ny vokatra tsara ao anatin'ny 7 andro fa tsy misy ny sorona amin'ny tombom-barotra na ny tombotsoanao. Famokarana famokarana: fampiasa amin'ny fanjakana ny teknolojia zavakanto mba hamolavolana sy hanamboarana ireo vokatra dia manome antoka ny mpanjifa handray ireo vokatra marina indrindra.
1. Fanadihadiana: Ny mpanjifa dia milaza ny antony misy ny endrika, ny fomba fiasa, ny tsingerin'ny fiainana ary ny fepetra takian'ny fanarahan-dalàna.
2. Famolavolana: Ny ekipa mpamorona dia voarohirohy hatramin'ny fanombohan'ny tetikasa iray mba hiantohana ny vokatra fanao tsara indrindra natao hifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.
Ny vokatra dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fampiharana isan-karazany ao amin'ny indostria.
Fastition haingana, maharitra hatramin'ny 120,000 kilometatra
Feno entona feno.Ny fanoherana mafy, ny fanerena, ny hafanana ary ny fanoherana ny fanenjehana1d auto ampahany co., Ltd. Ny orinasa mpanamory entana tsara indrindra amin'ny kalitao
Izay fanontaniana rehetra, manoratra ho anay ny Pls